China Hot Sale ndụ size ọla nchara mermaid ọgụgụ isi iyi na Holding Shell ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọrụ Atisan
Nkume marble ndu uzo ato gba ọtọ amara ihe ere
Hot Sale ndụ ogo mara mma ọla kọpa Mermaid ọnụ ọgụgụ Iyi na Holding Shell
Ihe: Ogba Ochie
TAG: Ọla Mmiri Isi Iyi Isi Iyi
Nkwado Ntanetị n'ịntanetị, Ntọala ebe
Project Solution ikike:
3D nlereanya imewe, ngụkọta ngwọta maka oru ngo
ỌR AR ARTISAN
ọla Mermaid Iyi
Ọla kọpa, ọla kọpa
Achọrọ Ndị Ahịa
Eksported Standard Osisi Ileba
Ehichapụrụ + Honed
Hot Sale ndụ ogo mara mma ọla kọpa Mermaid Iyi na Holding Shell
Bronze mermaid ọkpụkpụ Detaile
Ngwongwo nke ọla kọpa dị elu nke dị elu emebere maka ogige ndị ahịa anyị nke America. Ọ na-ezube itinye ihe ọkpụkpụ a n'ubi azụ ma nwee ike jikọọ ya na isi iyi mmiri dị ka obere isi iyi. A na-agba gburugburu umuaka abụọ a n'ụzọ doro anya ma maa mma.
Uru nke Ọkpụkpụ ọla
Ihe a na-eji ọla kọpa kpụọ na-eji ebu dị elu nke na-eguzogide ọgwụ dị ka ihe nkedo plasta ma ọ bụ ebu ájá, nke na-adịkarị n’ime na mpụta. A na-agbanye ọla kọpa n'ime ebu site na mbara igwe ma mee ka ọ dị mma.
N'ihi njirimara nke ọkpụkpụ ọla, ọ nwere njirimara na-adịte aka. Ihe ọkpụkpụ ọla ahụ n’onwe ya nwere mmetụta dị arọ, ebe ọ bụ na ihe ọkpụkpụ nke ihe osise ahụ nwere ike igosipụta àgwà nke agwa ka mma. Ọzọkwa, ihe osise nke ọla nchara dị mfe iji chekwaa ma ọ gaghị abụ ihe mgbe ochie.
Ojiji nke ihe nze ọla
Site na mmụba nke ụkpụrụ obibi, ochicho anyị maka ihe osise ọla na-eto eto, na ndụ ndụ nke ihe osise ọla kọpa. Ma na etiti obodo ma ọ bụ n’ogige azụ, ọla edo mermaid ọkpụkpụ bụ ezigbo nhọrọ.
Dị ka ụlọ ọrụ ọkpụkpụ na ọtụtụ afọ nke ahụmahụ, anyị nwere ọrụ magburu onwe ya na ndị ọkachamara na-akpụzi ọkachamara. All ngwaahịa anyị gallery nwere ike ahaziri, n'agbanyeghị gị size ma ọ bụ na agba chọrọ, anyị nwere ike izute ha.
Nkọwa: Hot Sale ndụ ogo mara mma ọla kọpa Mermaid Iyi na Holding Shell
Akụrụngwa: Ọla / Ọla kọpa / Brass
Size iche: Nkịtị Elu 1.3M ka 1.8M ma ọ bụ ahaziri
Elu Mkpa: Agba nke mbụ / nke na-acha ọla edo / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / nwa
Gbasara: ochicho mma
Nhazi: Nkedo na Mkpa Polishing
Anwụ ngwa ngwa: ziri ezi na ọnọdụ okpomọkụ site na -20 ℃ ruo 40 ℃. Ewezuga akụ́ mmiri igwe, mgbe mmiri na-ezo mgbe niile, nnukwu ebe snoo na-ada.
Ọrụ: Maka ezinaụlọ / ime ụlọ / ebe obibi ndị mọnk / fane / ala scape / isiokwu isiokwu na wdg
Mentkwụ ụgwọ: Jiri nkwa ahia were nweta ihu ọma ọzọ! Ma ọ bụ site na L / C, T / T
Nke gara aga: Ogige TV nke oge a na-acha ọkụ ọkụ nke French na-agba gburugburu mantels
Osote: Hot ere ọmarịcha nkume ubi ngwaahịa mmiri marble cherub isi iyi
ọla kọpa mara mma nwaanyị ọkpụkpụ n'èzí ubi ...
N'èzí mma ubi marble mini mmiri fou ...
Garden ọmarịcha ọcha marble ọkpụkpụ mgbidi f ...
China n'aka pịrị apị ji achọ nkume mmiri foun ...
Marble nkume nnukwu n'èzí mmiri igwu mmiri ...
Chinese eke nkume n'èzí girl nwata fung shu ...